Eyokuqala imodeli isithuthuthu Suzuki Bandit 400 nge injini elula uvele 1989, iRussia ngokuvamile amazwe e amasampula 1991 akhululwa. Okwamanje, le model of ngesithuthuthu usebhekene kutlhogeka bona kulungiswe kanye nezinguquko. Lena ezokuthutha sasivumela beshesha futhi okusheshayo ngokuvumelana negama layo - wangempela esijulile emgwaqweni "lomphangi", okuyinto lula ukuphatha.
Yazisa izithuthuthu Suzuki Bandit 400 zomthamo wawo nokucindezelwa, basuke elawula kahle uhla 8,000 ngomzuzu. Ubunjalo injini ngokwanele "hot", naphezu nokuqukethwe kwalo compact cubic, futhi lokhu akumangalisi, ngoba yona ifakwe iyunithi enamandla evela endleleni kwezemidlalo isithuthuthu Gsx-R400.
Ngenxa yalesi indaba ezinhle kakhulu izilungiselelo torque, impendulo okusheshayo ukushesha futhi omuhle kakhulu amandla distributor, ikakhulukazi ngemva 8,000 ngomzuzu. Lokhu kuqhuma ngokomzwelo ngesivinini kubangela imodeli Suzuki Bandit 400. Imininingwane ibhayisikili at high ezingeni lobuchwepheshe: mayelana 399 cc injini. cm., four cylinder, ezine-unhlangothi, okusemgqeni, valve 16 kanye nama-liquid indlu. Isisindo owomileyo ube yiziphethu kuba cishe 168 kg.
Ukuziphatha ngesikhathi ibhayisikili Suzuki Bandit 400 endleleni - lula futhi ashukumisayo, konke sibonga kuyi-gearbox six-speed kanye injini sporty. Ngaphezu kwalokho - ngemali ephansi. Functional, imishini eliphezulu futhi yezemidlalo izifiso ukunikeza ibhayisikili emgwaqweni izinzuzo ethile futhi kwenze kube omunye emabhayisikili best esigabeni sayo. Beshayela lokhu model ashisayo Street Fighter uzothola injabulo yangempela - akunakwenzeka usazothola ukuthola isithuthuthu imali etholakalayo.
Ukuthembeka, ukusebenziseka kanye ephezulu wenza ibhayisikili Suzuki Bandit 400 ethandwa zabuzwa emhlabeni wonke. Abakhiqizi imali ku uhlelo konke okuhle ukuze sisheshe, beshesha, onamandla futhi ngesikhathi esifanayo lula ukuphatha. Ukusheshisa "yensimbi ihhashi" isesikhathini km 100 6 imizuzwana - lokhu ufanelwe udumo.
Izinzuzo futhi zihlanganisa ephelele maneuverability nokushayela izici zayo. Kungaba ukuncoma kulabo Bikers abafuna ukuthola adrenaline nothando isivinini - yinto phakathi Bandit Bandit 250 futhi 600. A ngemali ephansi kwenza kube yokufuna efiselekayo Suzuki Bandit 400. Impendulo kubanikazi omuhle, abaningi ukudumisa ngempumelelo izimfanelo zakhe ukubopha ezathathwa libhayisikili Gsx-R400. Plus, isondo Ukugunda eziqondisa uthambile, ukumiswa ukhululekile ngaphandle esiwumvuthwandaba ngenkathi ushayela.
Ngokuvamile, lokhu imodeli esincintisana ofaneleyo le izithuthuthu ingxenye chetyrehkubovyh. He is kulula ukuyisebenzisa, enamandla, nge design elikhanyayo ivumelane ne Yizinga eliphakeme. Izithuthuthu angathengwa wabenza anamagama motosalonakh hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi phesheya. Kuye indawo izindleko salon we ibhayisikili kungaba kakhulu ezahlukene.
Ngokuthenga lokhu 'nensimbi' umngane, uba umnikazi imodi ngesivinini zokuthutha, ezizosebenza ngokwethembeka iminyaka eminingi. Yena njalo igcinwe endleleni, ngakho ngisho saqala kusheshe kahle inqubo ukushayela. Nokho, naphezu kwazo zonke izinzuzo izithuthuthu, ungakhohlwa mayelana nokuphepha kwabo.
Indlela ukuqaphela izimpawu zokuqala zomsebenzi?